By administrator on	 August 22, 2020 कोरोना अपडेट, फोटो फिचर, श्रीधर उपाध्याय, सम्पादकीय, स्थानीय
कोभिड १९ ले विश्वमा महामारि ल्याएको छ । स्वास्थ्य संकट नै निम्त्याएको छ । यो संकट नेपालमा अहिले गम्भिर रुपमा फैलिदो छ । आज मात्रै पर्सा, हेटौँडा, धरान, सिराहामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको खबर आएको छ । संक्रमण भयावह बन्दै छ । आत्तिनुपर्ने स्थिति भने होइन । सचेत र सजगताका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिकाका विषयमा ख्याल राख्ने समय आएको भने पक्कै छ ।
नवलपुर र चितवन यसबाट अछुतो छैनन् । मध्यनेपालको केन्द्र विन्दु भएकोले संक्रमणको जोखिम बढेको छ । भदौ महिना लागेसंगै समुदायमा फैलिएको छ । चितवनमा र नवलपुरमा भदौ लागेसंगै कोरोनाको संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । दैनिक २० देखि ३० जनासम्म थपिदै आएका छन् । चितवनमा ३२० भन्दा बढी संक्रमित संख्या रहको छ । अस्पतालमा मात्र नभइ घरको आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । करिब २ सय जना सक्रिय विरामी रहेका छन् । कैलाली, भरतपुर, खैरहनीका एक एक जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ । ३४ जना स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमणमा परेका छन् । बालविशेषज्ञ डा. विश्वबन्धु वगालेले आफ्नै घरको आइसोलेसनमा बसेर कोरोनालाई परास्त गर्नुभएको छ । आज मात्रै उहाँको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
यता नवलपुरमा करिब ४ सय जनामा कोरोना संक्रमण देखा परको छ । करिब ४० जना बढीमा सक्रिय केश रहेको छ । गैँडाकोट, कावासोती, विनयि त्रिवेणी, हुप्सेकोट लगायतका पालिकाहरुमा समुदायस्तरमा फैलिने क्रममा रहेको छ । संभावित संक्रमण रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाको पालना गरेनौँ भने स्थिति भयावह हुन सक्ने सरोकारवाला निकायले भनिरहेको अवस्था छ ।
तीज पर्व सकिएको छैन । भोली ऋषि पञ्चमी रहेको छ । महिला दिदिबहिनीहरुले ठूलो संख्यामा जमघट भएर पूजा गर्दछन् । यसपटक समूहमा पूजा गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । बुटवलमा एकजना मृत महिलाको अन्त्यष्टिमा सहभागि हुने ९० प्रतिशत मलामीलाई संक्रमण भएको पाइएको छ । अस्पतालले कोराना परिक्षण नगरी शव पठाउँदा समुदायमा सल्किएको छ । समुदायमा नफैलियोस् भनि सचेत हुनु जरुरी छ । सरकारको तर्फबाट परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु गुनासो छँदै छ । लकडाउन सरकारले गरेको छ । यसले पनि संक्रमण समुदायमा फैलिन रोक्छ । अब यसको पालना गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
अतिआवश्यक काम विना घर बाहिर निस्कनु भनेको अहिलेको अवस्थामा अपराध नै हो । कतै हाम्रो कारणले पुरै समुदाय संक्रमणको भुमरिमा त फस्दैन । घरबाहिर निस्कनु भनेको तँपाईको परिवारको सदस्यको जीवन संकटमा तपाईंले पार्नु हो । तसर्थ यो अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अपराध हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारका मात्र जिम्मेवारी हो भन्नु मुर्खता मात्रै हो । कोरोनाको संकट र व्यवस्थापनमा नागरिकको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफ्ना घरका सदस्यले साबुन पानीले हात धोएका छन् त ? घरको सदस्यहरु काम नपरी घरबाहिर निस्किएका छन् कि ? मास्क र स्यानीटाइजरको प्रयोग सहि तरिकाले गरेका छन् कि छैनन् ? घरेलु औषधिहरु नियमित सेवन गर्नुपर्ने कुराहरुको व्यवस्थापन मिलाउनुभएको छ ? परिवारको सदस्यको हेरचाहको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ ? यि प्रश्नहरुको जवाफ तपाईंले आफैलाई दिनुपर्ने छ । अनि मात्र कोरोना संक्रमणको संकटको व्यवस्थापन सम्भव छ ।